Wedzera purindaini yeinternet muGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, vatyairi, GNU/Linux
Muchidzidzo ichi chidiki, isu ticha tsanangura nhanho nhanho kuenda wedzera nyowani network purinda kune yedu GNU / Linux kugovera. Iko kumisikidzwa kwemhando idzi dzevaprinta kunogona kuratidzika kunge kwakaomarara kune vamwe, asi sezvamuchaona, hazvisi izvo zvakaomarara muzviitiko zvakawanda, kunyanya kana vari maprinta emhando dzakakurumbira uye mamodheru, aine madhiraivha eLinux, nezvimwe.
Zvakanaka, kana iwe uri kufunga nezvekuwedzera nyowani nyowani yaunayo mumba mako kana muhofisi yako uye kuti yakagovaniswa seimwezve network sosi, iwe unongofanirwa kutevedzera anotevera matanho kuti uisiye riite zvizere uye rakagadzirirwa kutanga kuishandisa. Nezve rondedzero, isu tiri kuzoshandisa nzira mbiri dzakasiyana zvichienderana nekuparadzirwa kweUbuntu, kunyangwe mune dzimwe dzingave maitiro akafanana ...
1 Maitiro 1 (Ubuntu Kugadziridza Turu):
2 Maitiro 2 (CUPS):
Maitiro 1 (Ubuntu Kugadziridza Turu):
Kana iwe ukashandisa yako wega dhizaini yekugadzirisa yemaprinta kubva kuUbuntu control panel, iwe unongofanirwa kutevedzera nhanho:
Vhura iyo yekudhindisa chishandiso kubva kuUbuntu gadziriso pani.
Dzvanya bhatani "Wedzera".
Dzvanya pa "Network maprinta" kana network maprinta mune yedhijitari pani.
Wobva "Tsvaga Network Printer" kana tsvaga network network.
Kana iyo purinta yatove yakabatana uye yakabatana kunetiweki yako, nyora iyo URL yeyako network purinda mu "Host" chinyorwa bhokisi uye tinya rinotevera Kazhinji iyo URL ndiyo IP yeprinta yako pane yako network. Semuenzaniso, kana iyo IP inodhinda iri 192.168.1.11, ipapo iyo URL ichave iri http: //192.168.1.11
Wobva wasarudza anogadzira purinda yako kubva kune iwo awunazvo wobva wadzvanya anotevera.
Nhanho inotevera yewizard ichave yekuwedzera iyo modhi yeprinta yako uye isu tinoenderera ...
Iye zvino tave kuzozivisa zita ratiri kuda kupa kune network network, nzvimbo uye tsananguro painobvunzwa.
Isu tinoenderera uye kana tichiisa iyo data, zvese zvinofanirwa kunge zvakanaka. Iwe unogona kupurinda peji rekuyedza sekurairwa mune iyo wizard nekudzvanya bhatani racho. Kana maitiro acho akafamba mushe, peji rekuyedza rinofanirwa kunge riri kudhinda ...
Asi maitiro aya haazove akafanana mune ese distros ...
Maitiro 2 (CUPS):
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakajairika kune mamwe ma distros, isu tichaenda kukupa iwe matanho enhanho yekumisikidza uchishandisa CUPS:
Chekutanga pane zvese, ita shuwa kuti purindaini yako yakabatana uye yakanyatsogadziriswa panetiweki yauchazoshandisa. Iwe unogona kufarira kuisa mapakeji senge Samba yekugovana zviwanikwa pane akasiyana heterogenful network kana uine Windows makomputa futi. Kana zvisiri, enda kunhanho inotevera ...
Zvino vhura bhurawuza raunoshandisa kazhinji, hazvina basa kuti nderipi.
Mune kero bar, nyora: "localhost: 631" isina makotesheni uye pinda ENTER kuenda kukero iyoyo, inozove yako IP kuburikidza nechiteshi 631.
Iye zvino iwe uchaona iyo CUPS yekumisikidza webhu interface uye tinya pane Yekutonga tebhu.
Wobva waenda ku Wedzera Printer kuti uwedzere iyo nyowani purinda.
Iye zvino unofanira kuisa zita rako rekushandisa uye password uye shandisa ENTER.
Sarudza kana iwe uchida iyo printer muDiscovered Network Printers chikamu kana sarudza Internet Printing Protocol uye tinya kuti uenderere mberi.
Iye zvino ichave nguva yekuisa kero ye network network mune iri bhokisi bhokisi iro rinoratidzwa kwariri. Iyo URL sekutsanangura kwandamboita ichave iyo IP yeiyo printa mhando "http: // 192.168.1.11" uye tinya Connection uye Enderera.
Zvino isa rakakodzera zita reprinta, tsananguro uye nzvimbo mumabhokisi akakodzera. Pakupedzisira «Wedzera Printer» uye «Enderera».
Inguva yekusarudza mugadziri we printa mu Inoita uye Enderera.
Wobva muenzaniso weprinta yedu kusarudza vatyairi kubva pane izvo uye «Wedzera Printer».
Mushure meizvozvo, iwe waita ... Edza kudhinda peji rekuyedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Wedzera purindaini yeinternet muGNU / Linux
Ndakaedza kanokwana zana kuisa network yeprinta uye hapana nzira ...
1) Tsvaga pawebhu ... usamboiwana. Ndakagovana mafaera pasina matambudziko, boka rinomhanya pasina matambudziko, ini ndine ip yakatarwa ... handizive zvekuita futi.
2) CUPS haigone kuwana iyo printa. Dambudziko rakafanana.
3) Ini ndakaisa graphical samba uye kwandiri hazvibviri kuinzwisisa ...
Chero mazano? Ndiri padhuze nekufenda ... hapana anogona kundiudza maitiro ekugadzirisa nyaya.
Ipi printer uye kugovera kupi?
Ndine dambudziko rakafanana nemaLAN maviri akasiyana. Vaviri maprinta ari HP uye akabatana nePC neW10.
Ini ndatoedza kuisa ip kero ne http, smb, ipp, nezvimwe ... etc. Ini handizive kuti ndeipi kero yekuisa nekuti haina kana kuiwana.
Iwo madhiraivha anowanikwa kune vese maprinta, dambudziko nderekuti maprinta haawanikwe pamambure ... kunyangwe akagovaniswa nemazvo.
Ndichiri kufanira kuyedza kuzviisa zvemuno mu ubuntu, asi ini ndine dambudziko rakaropafadzwa resefa rakundikana. Kwaziso.